Kacdoon ka dhashay dhallinyaro lagu dilay Gaalkacayo - BBC News Somali
Kacdoon ka dhashay dhallinyaro lagu dilay Gaalkacayo
9 Oktoobar 2018
Lahaanshaha sawirka Kasmaal Media
Image caption Dad badan oo isu soo bax ka sameeyay Gaalkacayo
Banaanbax balaaran ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacayo kaas oo ay dhigeen dhallinyarada magaalada, kagana cabanayeen dil loo geystay nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Xaamid Cabdullaahi Warsame (Xaamid Wardheere).
Dibad baxayaasha ayaa waxa ay codsanayeen in caddaalada la hor keeno dadkii dilka geystay, iyo in wax laga qabto adeeg la'aanta caafimaadka magaalada, taas oo ay sabab uga dhigeen in uu dhaawicii u geeriyoodo Xaamid.
Waa kuma Xaamid
Xaamid waxa uu ka mid ahaa 3 dhallinyaro oo muddooyinkii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Gaalkacayo, waxaana dadkaas ka mid ahaa nin lagu magacaabo Cabdirisaaq Saacid Cismaan (Waddani Arts) oo ahaa wariye ka hawlgala idaacadda codka nabadda, islamarkaasna ahaa farshaxaniiste caan ah.
Lahaanshaha sawirka Siciid Nadaara
Image caption Xaamid (Bidix) oo ku sugan xeebta Garacad
Sida uu BBC-da u sheegay wariye Siciid Cabdullaahi Nadaara , Xaamid Wardheere waxa uu ahaa nin si weyn caan uga ahaa gudaha magaalada, isaga oo ka mid ahaa dhallinyarada isboortiga, una safan jiray kooxda Hombo baro. Waddani Arts waxaa lagu dilay Toori xilli habeen ah oo uu shaqada idaacadda kasoo baxay.
Dalxiiskaygii Soomaaliya iyo duruustii aan ka bartay
Tifaftiraha BBC-da ee Afrika oo ka qisoonaysa aqoontii ay u lahayd wiilkii lagu diley Muqdisho
Maxay dadka u dareemaan gaboowga iyaga oo da’yar?
Dhallinyaro Puntland ka socota oo aqoon korarsi u tegay Hargeysa
Dhallinyaro Somaliland oo u ololeeyo midnimada dadka xiligan doorashada
Saxafi Siciid oo ka hadlaya aqoontii uu u lahaa Xaamid ayaa yiri "Waxaan xusuustaa safar dalxiis ah oo aan isu raacnay magaalada Gaalkacayo, runtii waxaanan marnaba halmaami doonin wanaaggiisa iyo sidii uu dhallinyaradii kale ula dhaqmayay" . Wuxuu intaas ku daray in dhallinyarada magaalada uu ka baxay shaqsi ay adagtahay in booskiisa la buuxiyo.
Habeenkii isniinta ay soo galaysay ayaa isaga oo gaari wata lagu furey rasaas sida laga soo xigtay dhallinyaro la socotay, waxaana la sheegay in rasaasta ay fureen askar ka tirsan ciidammada Puntland.
Xaamid rasaastii ayaa dhaawacday, balse dhibka ugu weyn waxa uu ka dhacay isbitaalada iyo goobaha caafimaad ee magaalada.
Adeegga Caafimaadka Gaalkacayo
Image caption Xaamid waxa uu ku haminayay nolol qiimo leh dalka gudihiisa, wuxuuna jeclaa kheyraadka Soomaaliya
Dadkii maanta banaanbaxayay waxa ay sheegeen in ay qasab tahay in wax laga qabto adeegga caafimaadka magaalada, waxayna tilmaameen dayaca iyo habka maamulka caafimaad xumo oo halkaas ka jira.
Tusaale waxa ay usoo qaateen in Xaamid dhaawiciisa la geeyay isbitaalka weyn ee Gaalkacayo, balse la waayay dhaqtarkii wax ka qaban lahaa, qalabkii neefta ka caawin lahaane uu ku xirnaa qol uu qof furihiisa la maqnaa.
Waxa ay danta kaliftay in labo isbitaal oo kale la isu marsiiyo, kuwaas oo nasiib daro wax ka qaban waayay Xaamid, dhaqaatiirtiina ay yimaadeen 7 saacadood kadib mar uu qur baxay wiilkii.
"Eedeymo badan ayaa jira, isbitaalka weyn dawooyinkiisa waa la iibsadaa, dhaqaatiirta waxa ay leeyihiin xarumo u gaar ah, ma jiro wax la xisaabtan ah, dad badan ayaana dhibbane u noqday arrinkan" ayuu yiri saxafi Siciid.
Yaa dila dadka?
Ma jirto qof illaa iyo hadda mas'uuliyiinta Puntland ay u qabteen dilka wiilkan , waxaase jira warar ka hadlaya in la aqoonsaday askarigii rasaasta furey, kaas oo la sheegay in uu u baxsaday magaalada Bacaad Weyn, balse raadkiisa lagu joogo.
Dhallinyaradii banaanbaxa dhigay hadalo ay meesha ka jeediyeen ayay ku sheegeen in dadka dilalka geysta aanan wax tallaabo laga qaadin. Waxay intaas ku dareen in odayaasha ay ka wada xaalaan, maalinka dambane qofkii lagu soo fasoxo dariiqa, sidaasna uu dil kale ku geysto.
Dowladda Puntland ayaanan weli ka hadli dilalka dhacay.